त्यसपछि हस्तनाको घरमा दसैं आयो - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
थप १ हजार ४९० जनामा कोरोना पुष्टि, ९ जनाको मृत्यु
काठमाडौँ । आज थप एक हजार ४९० जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई लाख ३६...
Home प्रदेश त्यसपछि हस्तनाको घरमा दसैं आयो
छ सन्तानकी हस्तनाको श्रीमान बिते, बस्ने घर कमाई खाने बारी छैन
दैलेख । दैलेख आठविस नगरपालिका –५ कि हस्तना विक दसैं कसरी मान्ने होला भनेर चिन्तामा थिइन् । केही दिन अगाडी ६ सन्तानकी एक्ली आमा हस्तनालाई छाक टार्न समस्या भएको समाचार प्रकाशित भएपछि हस्तना लागि दैलेख जिल्ला स्थित गैरसरकारी संस्थाबाट सहयोग जुटेको थियो ।
गरिबीले ठगेको हस्तनाको परिवारलाई गैरसरकारी संस्थाहरुले जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्न खोजे पनि वडा कार्यालयले सिफारिस नदिएको र खान लगाउन समेत मुस्किल भएको समचार प्रकाशित भएको थियो । हस्तनाको परिवारको फोटो सहित समाचार प्रकाशन भएपछि प्रतिनीधि सभा सदस्य पार्वती विशुन्केको पहलमा शान्ति चिल्ड्रेन फाउण्डेशनले पाँच हजार र जिल्लास्थित सामाजिक अभियान्ताहरुले सहयोग स्वरुप संकलन गरेको आठ हजार रुपैयाँ सहित १३ हजार रुपैयाँ हस्तनाको परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । आठबीस नगरकी उपप्रमुख दिपा बोहराले रकम हस्तान्तरण गरिन् ।
दशैको बेला नाबालक छोराछोरी के खुवाउने भनेर चिन्तामा पिरोलिएकी हस्तना सहयोग पाएपछि खुशी भएकी छिन्
बडादशैंको मुखमा भोकभोकै बस्न बाध्य विक परिवारलाई सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल दैलेखले खाद्यान्न उपलब्ध गराएको छ । चामल, दाल, तेल, नुन, साबुन, ब्रस, मनजन सहयोग गरेको संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष हीरासिंह थापाले जानकारी दिए । थोरै भएपनि राहत होस् भन्ने उदेश्यले खाद्यान्न सहयोग गरिएको संस्थापक अध्यक्ष थापाले जनाए ।
यो पनि पढ्नुहोस कोरोना भाइरस बिरुद्धको खोप प्रयोग गर्न अनुमति
२८ बर्षिय हस्तनाका चार छोरी र दुई छोरा गरि छ सन्तान छन् । बस्नलाई बास र उब्जनी हुने बारी समेत नभएकी हस्तनाको कमाई गर्ने पतिको मृत्युपछि परिवार विचल्लीमा परेका हुन् । श्रीमानको कमाईले पालिएको परिवारमा श्रीमानको मृत्यु हुँदा ६ सन्तानलाई पालनपोषण गर्न हस्तनालाई हम्मेहम्मे परेको छ । ‘श्रीमानको उपचारमा लागेको ऋण तिर्न सकेको छैन्, बालबच्चाको पालनपोषणमा समस्या छ, छोराछोरी चावपर्वमा पनि भोकभोकै हुन्छन् की भन्ने चिन्ता थियो ।’ यो बर्ष त सहयोग मनले दशै मनाउला । अब दिन कसरी काट्ने उनले दुखेसो पोख्दै । सहयोगी मनलाई धन्यवाद दिईन ।
दशैको बेला नाबालक छोराछोरी के खुवाउने भनेर चिन्तामा पिरोलिएकी हस्तना सहयोग पाएपछि खुशी भएकी छिन् । उनले भननिन,मेरा बालबच्चालाई के खुवाउला भनेर चिन्ता लागेको थियो । दशै मनाउनको लागि साहुँ महाजनको गएँ । तर कसैले पत्याएनन् ।’
दैलेखबाट गत बिहीबार आएको टोलीले खाद्यान्न र नगद सहयोग गरेपछि नाबालक छोराछोरीलाई मिठो मसिनो बनाएर खुवाएकी छिन् । ‘मैले १३ हजार नगद र चामल पाएँ’,खुशी हुदै उनले थपिन ।
खेल राजधानी समाचारदाता - December 2, 2020
Breaking News राजधानी समाचारदाता - December 2, 2020
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा स्रोतको कमी नहुने बताएका छन् । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकमामा बज्रबाराही चापागाउँ अस्पतालको १५ शैया भवन निर्माणको...
काठमाडौँ । नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट थप २३ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट मर्नेको सङ्ख्या १ हजार ४१२ पुगेको...
एजेन्सी - October 16, 2020
युएइ । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) अन्तर्गत गएराति सम्पन्न खेलमा पञ्जाब विजयी भयो । उसले बैंग्लोरलाई ८ विकेटले पराजित गर्दै प्रतियोगितामा दोस्रो जीत दर्ता...
तीनै तहमा पदपूर्तिका सबै प्रक्रिया बन्द
भवनाथ प्याकुरेल - May 2, 2020
काठमाडौं । सरकारले केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहका कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा नयाँ कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया बन्द गरेको छ ।...
Not-to-be-missed राजधानी समाचारदाता - July 29, 2020
काठमाडौँ । ‘सम्झनाले मुटु पोल्छ गोधूलिको घाम टर्दा, पखेरोमै ओइलिन्छु कि निष्ठुरीले छोडी जाँदा’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियो युटुबमार्फत् सार्वजनिक भएको छ । गीतकार...
के यौन सम्पर्कले वजन बढछ ?
जीवनशैली एजेन्सी - February 7, 2020
विवाहपछि प्राय व्यक्तिको वजन बढने गर्छ । तपाईले पनि महसुस् गर्नु भयो होला । विवाहको ३ देखी ६ महिनाको विचमा तपाईको...
मूलमै भूल भएको शिक्षा
बिचार डा. देवीप्रसाद आचार्य - February 13, 2020
आजको २१सौं शताब्दीमा शिक्षा मानिसको आधारभूत आवश्यकता भएको छ । शिक्षाबिना मानिसको जीवन पूर्ण हुन सक्दैन । व्यक्ति, समाज, राष्ट्र र सिंगो...
भर्खरै राजधानी समाचारदाता - May 8, 2020
नेपालगञ्ज । नेपालगञ्जमा थप एक जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा परीक्षण गर्दा १६ वर्षका किशोरमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको...
Breaking News प्रकाश अधिकारी - March 1, 2020
सुर्खेत । प्रमाणीकरण भएको १० महिनापछि प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन हुने भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाले गत जेठमा पारित गरी...
प्रमुख राजधानी समाचारदाता - August 23, 2020
काठमाडौं । कर्मचारी समायोजन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा समेत कर्मचारीहरू सञ्चालन गर्ने गरी नयाँ कानुन बन्न नसक्दा समायोजन भएका कर्मचारीहरू नै मर्कामा परेका छन् ।...
खेल राजधानी समाचारदाता - November 29, 2020
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्य सन्दीप लामिछानेलाई कोरोना संक्रमण भएको छ । सन्दीपले सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि गरेका हुन्...
प्रदेश राजधानी समाचारदाता - November 28, 2020
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोईरालाले नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार के गर्दैछ भन्ने कसैले भन्ने अवस्था नरएको बताएका...
यो पनि पढ्नुहोस चालक अनुमतिपत्रका लागि परीक्षा नलिइने